I-Stylish 2bd/2bath w/greenbelt eWest Plano ethule - I-Airbnb
I-Stylish 2bd/2bath w/greenbelt eWest Plano ethule
Plano, Texas, i-United States
I-Stylish 2bd/2bath single story 1729 sq ft ekhaya. Ifakwe ngokuphelele futhi ihlotshiswe. I-TV engu-55" egumbini lokuhlala, i-TV engu-43" esezingeni eliphezulu.Yonke impahla emisha ekhishini kanye ne-washer dryer in unit. Idekhi yangasese ibheke i-greenbelt. Abenzi bekhofi ne-Expresso batholakala nempahla.Le yunithi yokugcina ihlinzeka ngakho konke - eduze nezinsiza ze-Plano & Frisco. Ukufinyelela kalula ku-Tollway imizuzu nje ukusuka e-Addison.I-oasis ethule enendawo eluhlaza kanye nokuhamba imizuzu emihlanu nje ukusuka e-Arbor Hills Nature Preserve.
Qeda iyunithi endaweni ethule kakhulu - izindawo eziningi eziluhlaza ngaphandle komnyango ongaphambili! Ukuphela kwe-Cul-de-Sac yohlobo enendawo yokupaka eyengeziwe etholakala kalula.Isikhala esiningi sokuhamba nenja (noma wena ngokwakho) ku-greenbelt. Uma ufuna ukuqwala izintaba - ukuhambo lwemizuzu emihlanu nje ukuya endaweni egcina imvelo ye-Arbor Hills - enezindlela zayo zokuhamba izintaba nezindlela zokuhamba ngebhayisikili!
Ngizotholakala uma unemibuzo. Nginochwepheshe abaqeqeshiwe abatholakalayo uma kwenzeka izinkinga futhi ngizobathumela ngokushesha.Ngizohlangana nawe ngemuva kokungena kokuqala ngesikhathi esivumelana ngaso futhi ngizokunikeza imininingwane yokuxhumana ukuze ungifinyelele ngqo ngemuva kwalokho.
Ngizotholakala uma unemibuzo. Nginochwepheshe abaqeqeshiwe abatholakalayo uma kwenzeka izinkinga futhi ngizobathumela ngokushesha.Ngizohlangana nawe ngemuva kokungena kokuqala nges…
Hlola ezinye izinketho ezise- Plano namaphethelo